Maka: i-google chrome » Martech Zone
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Uma uyi-ejensi noma inkampani enephothifoliyo yamasayithi noma amakhasi ofisa ukuwabelana ku-inthanethi, kungenzeka ukuthi udlule ebuhlungwini bokuzama ukuthatha izithombe-skrini ezifanayo zesayithi ngalinye. Elinye lamakhasimende esisebenza nalo lakha izixazululo ze-Intranet ezingabanjelwa ngaphakathi ngaphakathi kwenkampani. Ama-intranet ayasiza kakhulu ezinkampanini ukuxhumana nezindaba zenkampani, ukusabalalisa ulwazi lokumaketha, ukuhlinzeka
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Isimemezelo sika-Apple sikaJuni 2020 sokuthi i-IDFA izoba yisici sokungena kubathengi ngo-Septhemba ukukhishwa kwe-iOS 14 kuzwakale sengathi umbhoxo udonswe ngaphansi kwemboni yezikhangiso eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-80, uthumela abathengisi emsakazweni ukuthola into engcono kakhulu elandelayo. Sekuphele izinyanga ezingaphezu kwezimbili, futhi sisazinwaya amakhanda. Ngokuhlehliswa kwakamuva okudingeka kakhulu kuze kube u-2021, thina njengemboni sidinga ukusebenzisa lesi sikhathi ngempumelelo ukuthola indinganiso entsha yegolide
Isikhathi sokufunda: 5 imizuzu Kule nkathi yedijithali, impi yesikhala sokumaketha isishintshile online. Ngabantu abaningi abaku-inthanethi, okubhaliselwe kanye nokuthengisa kusukile endaweni yabo yendabuko kuya kokusha kwabo, okwedijithali. Amawebhusayithi kufanele abe kumdlalo wawo omuhle kakhulu futhi acabangele ukwakheka kwamasayithi nesipiliyoni somsebenzisi. Ngenxa yalokhu, amawebhusayithi abaluleke kakhulu emalini etholwa yinkampani. Njengoba kunikezwe lesi simo, kulula ukubona ukuthi ukusebenza kahle kwezinga lokuguqulwa, noma i-CRO njengoba kwaziwa, sekuye kwaba kanjani
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Ngisanda kubhala ngothando lwami olubuyiselwe ku-Twitter futhi ngabelane ngamathuluzi ambalwa wokulawula abalandeli bakho be-Twitter. Nali elinye ithuluzi elihle engisanda kulithola! URiffle nguCrowdRiff yi-Chrome Plugin engeza ifasitelana ledeshibhodi le-Twitter elikusiza ukuthi ubone futhi uhlaziye imininingwane kumsebenzisi we-Twitter. URiffle uhlinzeka ngemininingwane kufaka phakathi okwenziwayo, ukubandakanyeka kwe-akhawunti, umthombo wama-tweets kanye nokushiwo kwabo okuphezulu kanye nokuqina kwabo.